နားကပ် ဝယ်ပေး မယ်ပြောပြီး ဦးလေးတော်စပ် သူမှ ၁၄ နှစ်အရွယ်တူမတော်စပ် သူ ကို – Shwewiki.com
နားကပ် ဝယ်ပေး မယ်ပြောပြီး ဦးလေးတော်စပ် သူမှ ၁၄ နှစ်အရွယ်တူမတော်စပ် သူ ကို
နား ကပ်ဝယ်ပေးမယ်ပြောပြီး ဦးလေးတော်စပ်သူမှ ၁၄ နှစ်အရွယ်တူမတော်စပ်သူကို သားမယားပြုကျင့်သဖြင့် ကိုယ်ဝန် (၂) လရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်
တ နင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင် သရက်ချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကျေးရွာအပြင်ပိုင်း (ဘ )ဦး………၏ သမီးဖြစ်သူမ……….. အသက် ၁၄ နှစ်အား ဦးလေးတော်စပ်သူဦးစိုးမြင့် အသက် ၆၉ နှစ်မှ နားကပ်ဝယ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုကာမိဘများ ဂဏန်းရှာ ပင်လယ်ထွက်ချိန်များတွင် အကြိမ်ကြိမ်လူမဆန်စိတ်ဖြင့်
သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသဖြင့်၁၄ နှစ်အရွယ် မ(……….)တွင် ကိုယ်ဝန် ၂ လ ရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူမှ အပိုင်နယ်မြေရဲစခန်းသို့သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် သရက်ချောင်းမြို့နယ် ဝင်းဝနယ်မြေရဲစခန်းမှ မ.စ (ပ) ၄/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆အရ ၁၈း၁၅ နာရီအချိန်တွင် အမှုရေးဖွင့်ထားရှိပြီး ရဲအုပ်နေလင်း မှအမှုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း သတင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။သတင်းပေးပို့သူ/ကယ်တင်ရှင်(PFA)/သရက်ချောင်းမြို့နယ်တာဝန်ခံ/ပြည်သူ့မဏ္ဍိုင်~နေပြည်တော်ဟစ်တိုင်
နား ကပျဝယျပေးမယျပွောပွီး ဦးလေးတျောစပျသူမှ ၁၄ နှဈအရှယျတူမတျောစပျသူကို သားမယားပွုကငျြ့သဖွငျ့ ကိုယျဝနျ (၂) လရခဲ့တဲ့ဖွဈရပျ
တ နင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ထားဝယျခရိုငျ သရကျခြောငျးမွို့နယျပွငျးဖွူကွီးကြေးရှာအပွငျပိုငျး (ဘ )ဦး………၏ သမီးဖွဈသူမ……….. အသကျ ၁၄ နှဈအား ဦးလေးတျောစပျသူဦးစိုးမွငျ့ အသကျ ၆၉ နှဈမှ နားကပျဝယျပေးမညျဟု ပွောဆိုကာမိဘမြား ဂဏနျးရှာ ပငျလယျထှကျခြိနျမြားတှငျ အကွိမျကွိမျလူမဆနျစိတျဖွငျ့
သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခွငျးကိုခံခဲ့ရသဖွငျ့၁၄ နှဈအရှယျ မ(……….)တှငျ ကိုယျဝနျ ၂ လ ရှိနကွေောငျး စဈဆေးသိရှိရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူမှ အပိုငျနယျမွရေဲစခနျးသို့သှားရောကျတိုငျကွားခဲ့သဖွငျ့ သရကျခြောငျးမွို့နယျ ဝငျးဝနယျမွရေဲစခနျးမှ မ.စ (ပ) ၄/၂၀၂၀ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆အရ ၁၈း၁၅ နာရီအခြိနျတှငျ အမှုရေးဖှငျ့ထားရှိပွီး ရဲအုပျနလေငျး မှအမှုစဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး သတငျးစုံစမျးသိရှိရပါသညျ။သတငျးပေးပို့သူ/ကယျတငျရှငျ(PFA)/သရကျခြောငျးမွို့နယျတာဝနျခံ/ပွညျသူ့မဏ်ဍိုငျ~နပွေညျတျောဟဈတိုငျ
စည်ပင် က ဖျက်ဆီးလိုက် လို့ ပျက်ဆီးသွား တဲ့ လိမ္မော်သီးဖိုး ၄၀၀၀၀ ဒီနေ့ အဘကို လှူခဲ့ပါပြီ